कोमेन बजारमा अघिल्लो हप्ता १३१६ कारोबार भएकामा गत हप्ता १०४० कारोबार भए । गत हप्ता शुक्रवार भने कारोबार भएन । गत हप्ता प्राकृतिक ग्यास र कच्चा तेलको पनि कारोबार सुरु भयो । कारोबार भएका धातुहरूको मूल्य सुरुमा भन्दा साताको अन्तमा बढेको छ ।
अप्रिलमा राफसाफ हुने सुनको १ केजीको कन्ट्राक्टमा सोमवार बजार खुल्दा प्रतिदस ग्राम मूल्य रू. २६ हजार ३ सय रहेकामा बिहीवार बन्द हुँदा सो बढेर रू. २६ हजार ३९७ भयो । साताभर यसको उच्चतम मूल्य बिहीबार रू. २६ हजार ४३० थियो भने न्यूनतम मूल्य मंगलबार रू. २६ हजार १४० थियो । त्यसैगरी सुनको मे कन्ट्राक्टमा सोमबार बजार खुल्दा मूल्य रू. २६ हजार ३३७ रहेकामा बिहीवार बजार बन्द हुँदा सो बढेर २६ हजार ५२३ भयो । साताभर यसको उच्चतम मूल्य बिहीवार रू. २६ हजार ५६० थियो भने न्यूनतम मूल्य मंगलबार रू. २६ हजार १८२ थियो ।
अप्रिलमा राफसाफ हुने ३० केजीको चाँदीको कन्ट्राक्टमा सोमबार बजार खुल्दा मूल्य प्रतिकिलो रू. ४२ हजार ४७७ रहेकामा साताको अन्तमा बजार बन्द हुँदा सो बढेर रू. ४३ हजार ६४८ थियो भने न्यूनतम सोमबार रू. ४२ हजार ४५३ थियो ।
नयाँ कारोबार भएको कच्चा तेलको अप्रिल कन्ट्राक्टमा मंगलबार बजार खुल्दा मूल्य प्रतिब्यारेल ५९४९ रुपैयाँ ५७ पैसा रहेकामा बिहीबार बजार बन्द हुँदा सो बढेर ६०१८ रुपैयाँ भयो । साताभर यसको उच्चतम मूल्य बुधबार रू. ६०२६ थियो भने न्यूनतम बुधबार नै रू. ५९३७ थियो ।
वर्ष ५, अंक ३१, २०६६, चैत २३–२९
४२ लाखको गड्यौला आयात[२०७७ असोज, १२]
सेयर बजारका निर्णायक १० कम्पनी[२०७७ असोज, ११]
ट्रफल खेतीमा बेलायती साझेदारी[२०७७ असोज, ९]
नेपाली बाँसका घर निर्यात हुने[२०७७ असोज, ८]
४ सय च्यानलको ‘डिजिटल टीभी’ सञ्चालनमा आउने[२०७७ असोज, ७]
नेपाल रेडक्रसको श्वेतपत्र :दर्ता नवीकरण र निर्वाचन प्राथमिकतामा
हिमालय एयरलाइन्सको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा स्थगित